အခေါ် အဝေါ် အသုံး အနှုန်း များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အခေါ် အဝေါ် အသုံး အနှုန်း များနှင့် စပ်လျဉ်း၍
အခေါ် အဝေါ် အသုံး အနှုန်း များနှင့် စပ်လျဉ်း၍
Posted by Paing Lay on May 16, 2014 in My Dear Diary | 25 comments
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ဒေသကို က.ည.န ရောက်လာတော့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရမရ ကျွန်တော့်ဘကြီးဆီ သွားမေးရင်းနဲ့။ အနော် အမှတ်တမဲ့ အာမေဋိတ်တစ်ခုရွတ်မိသွားတယ်။ ကျွန်တော့်ဘကြီးကလည်း မရသေးဘူးရှင်းပြတော့ ကျွန်တော်က “ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ” ဆိုပြီး လေ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်ဘကြီးက “အောင်မာ မင်းက ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီနဲ့ မင်းစကားပြောပုံက သောက်ချိုးကိုမပြေဘူး”။(မှတ်ချက်-ကျွန်တော့်ဘကြီးကလည်း စိတ်ဆတ်တာကလည်း တစ်ကြောင်းပေါ့) ကျွန်တော်လည်း အပြန်မှာ စဉ်းစားရင်း အောင့်သက်သက်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ထဲမှာ သရိုးသရီဖြစ်လွန်းလို့ စာပေရေချမ်းစင်က ပြည်သူ့နီတိကို ရှာဖတ်ကြည့်တယ်။ အဲဒီအသုံးအနှုန်းတွေ မသုံးဖို့ ညွန်ကြားထားတာလည်း မရှိ။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်မန်းလေးကို ရောက်တော့ ကျွန်တော့်ဘကြီး သွားဆရာဝန်ဆီကိုသွားတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒီသွားဆရာဝန်နဲ့ကလည်း အမျိုးမကင်းပါဘူး။ အိမ်ရှင်ပီပီ ဖျော်ရည်လေးဘာလေး ဧည့်ခံတော့ ကျွန်တော်ကလည်း ဂျာနယ်ပေါ်က ဆောင်းပါးကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်နေတုန်း ဖျော်ရည်လာကမ်းတော့ ကျွန်တော်ကလည်း လက်တစ်ဖက်တည်း နဲ့ ယူမိလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်ဘကြီးက“မင်းလူလိုမသိဘူးလား။ သူများက တရိုတသေ ပေးချိန်မှာ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူလေ ယဉ်ကျေးမှုကိုမရှိဘူး”။ သူပြောပြီးမှ ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဖျော်ရည်လာကမ်းတဲ့ အဒေါ်ကလည်း တစ်ဖက်တည်းလာကမ်းလို့ ကျွန်တော်လည်း တစ်ဖက်တည်းယူလိုက်တယ်။ ဒါတော့ မလွန်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သိတာက ထမင်းစားရင် တပြတ်ပြတ်နဲ့ အသံမထွက်အောင်မစားနဲ့၊ ဟင်းချိုသောက်ရင် တရှုးရှုး နဲ့ အသံမထွက်နဲ့၊ ထမင်းစားရင်း ဇွန်းနဲ့ ဇလုံမခေါက်ကောင်းဘူး၊ စလောင်းဖုံး နှစ်ချပ်ကို လင်ကွင်းမတီးကောင်းဘူး ဘာညာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါတွေ လုပ်ရင် အဆင့်အတန်း ရှိရှိ မနေတတ်တဲ့သူ ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းမှာ သတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အိမ်မှာ ထိန်းချုပ်တာတွေ များလာတော့ အပြင်ရောက်လို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင် ယောက်ျားလေး အများစုက ဆဲတတ်လာတယ်။ ပိုဆိုးတာက အခု Dota Games တွေ ခေတ်စားတဲ့ အချိန်ဆိုပိုဆိုး ဖိုမ ကိစ္စတွေ ရောထည့်ပြီး တစ်တစ်ခွခွကို ဆဲတတ်လာတော့တယ်။ မိန်းကလေး အများစုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လက်ထက်အထိ ပေါပေါပဲပဲ အချစ်ဝတ္ထုတွေ ဖတ်တတ်လာတယ်(အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ Korea Drama Series တွေကြည့်တတ်လာတယ်။နဂိုကထက်ပိုပြီး ပဲများတတ်လာတယ်။ တချို့ဆိုရင် ဗရုတ်ကျကျ ကျောင်းသားဟာသကားတွေပါသေး)။
နောက်ဆုံးတစ်ခု ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုက ဝတ္ထုတိုင်းလိုလိုမှာ မိန်းကလေးက သူ့ရဲ့နာမည်ကို စာဖတ်သူ ပရိတ်သတ် မသိခင်မှာ “သူမ” ဆိုပြီး နာမ်စား ထည့်သုံးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဲဒီအသုံးအနှုန်းကို တချို့က စာစီစာရိုက်ပဲမှားလို့လား။ ဒါမှ မဟုတ်စာရေးဆရာက တမင်ပဲ စတန့်ထွင်ပြီး ထည့်သလားတော့မသိ။ အဲဒီ “သူမ” အသုံးအနှုန်းက နေရာတိုင်းမှာသုံးလို့ရတဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ ဆိုပါတော့ ဥပမာ-“လူကြီး သူမ” ဆိုပါတော့။ တချို့ ဝတ္ထုကျတော့ “သူမသည် လူကြီးသူမ စကားကို လုံးဝနားမထောင်ပါ” ပေါ့ဗျာ။ စကားလုံး တွေက ထပ်ကုန်တော့ ကျွန်တော်တို့တောင် ဖတ်ရတာ ဝတ္ထုအရသာပျက်သွားသလိုပဲ။ ပြီးတော့ နာမ်စားကို စကားတစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံးကိုလည်း ပို့ပစ်လိုက်တာရှိသေးတယ်။ ဥပမာ- “အတ္တကြီးလွန်းသည့် သူမ၊ အငြိုးကြီးလွန်းသည့် သူမ” ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ နောက်ပြီး ရသစာပေမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဝတ္ထုရဲ့ စာလုံး အဆုံးသတ်မှာ “ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် သူ” ဆိုပြီး နာမ်စားလား နာမည်လား မသဲကွဲရှာပါဘူး။(ပေါပေါပဲပဲ အချစ်ဝတ္ထုတွေ ဖတ်ဖူးတုန်းက တွေ့မိတာလေးတွေပါ)။
P.S အခု ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ပို့စ်က သိလွန်းတတ်လွန်း၍ မဟုတ်။ ခံစားမိတာလေးတွေ မျက်စိရှေ့မှာ မြင်မိတာလေးတွေ နားနဲ့ ဆတ်ဆတ်ကြားမိတာလေးတွေကို ရေးခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
အိမ်မှာ ထိန်းချုပ်တာများလာလို့ အပြင်ရောက်ရင် ပိုပို ဆဲတယ် ဆိုတာကတော့
တကယ်က လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုဟာ သူကျင်လည်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း ဆိုင်နေပါတယ်။
အများစုက ကျင်လည်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီး အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေ ပြောင်းသွားတတ်တာမျိုးဗျ
စကားပြောတတ်စ ကလေးနှစ်ယောက်ကို Dota ဆိုင်ထဲ တစ်ယောက် တရားပွဲထဲ တစ်ယောက် ချထားပေးကြည့်ဗျာ သိလာလိမ့်မယ်
မိန်းကလေးတွေ ကိုးရီးယားကားကြည့်ပြီး ပဲများတတ်တာကတော့ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးဆုံး ဝင်ရောက်ထောက်ပြသွားပါသော သိဂျားမင်းကြီးအား ကျေးဇူး အနန္တတင်ရှိပါရောင်း သို့ပေသိ အဲဒီလိုဆိုပြန်တော့လည်း တချို့ ရှေးလူကြီးတွေက မွေးရာပါဗီဇဆိုပြီး ဆင်ခြေတက်သေးသဗျ။
အဲဒါ ဆိုရင်တော့ လူကြီးတွေပဲလေ… ဆိုပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါဗျာ…..
ရိုသေတယ်.. ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ.. အတင်းကာရော..ဖားခိုင်းပြီး.. လူတန်းစားခွဲလိုက်တဲ့.. ယဉ်ကျေးမှုပါ..။
တိုးတက်တဲ့..ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်နဲ့.. ပတ်ဝန်းကျင်.. အဆုံးတနေ့.. တိုးတက်တဲ့.. နိုင်ငံကြီးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်..။
ယူအက်စ်သမ္မတနဲ့ ဒုသမ္မတဟာ.. ယူအက်စ်ရဲ့..ပထမအမြင့်ဆုံးနဲ့..ဒုတိယအမြင့်ဆုံးရာထူးရှိသူတွေပေါ့.
လိုအပ်တဲ့.. Respect ပေးကြပါတယ်..။
လွတ်လပ်စွာ ၂ယောက်ထဲဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတော့.. F Words တွေသုံးပြောတယ်တဲ့..။ ဘယ်မှာသွားပေါ်သလည်းဆိုတော့.. မိုက်ကနေအသံဖမ်းမိသွားတဲ့အခါ…တဲ့..။
‘A Big F—ing Deal’: Biden’s Health Care Reform F-Bomb On …
May 23, 2010 – Vice President Joe Biden, perhaps overcome with excitement during his … Obama on the passage of health care reform, dropped an F-bomb on live … Here’saword of advice for the opposition party: If you blockade financial …
မြန်မာစာ မြန်မာစကား မြန်မာမူးလဲ ပိုစ့်ကိုလည်း ပြန်သတိရသွားပါရဲ့။
ရှုပ်ကို ရှုပ်တဲ့ မြန်မာစာပါကွယ်
မြန်မာစာမှာတော့ သူမ ဆိုတဲ့ နာမ်စားထက် သူ ဆိုတဲ့နာမ်စားက ပိုသင့်တော်တယ်ထင်ပါကြောင်း
မြန်မာစာ အလိုအရ သူ ဆိုတာက မိန်းမဖြစ်စေ ယောက်ျားဖြစ်စေ ညွှန်းဆိုလို့ရပါကြောင်း
ပထမဆုံး ရုံးစတက်တဲ့နေ့မှာ အတူတူဝင်တဲ့ တစ်ယောက်က အင်္ဂလိပ်မူကြိုမှာ ဆရာမလုပ်ဖူးတယ်.. အသက်ကလည်း ၂၅ ကျော်ပေါ့.. အနော်က ၁၉ နှစ်၊ ခုမှ အလုပ်စလုပ်မှာ..
မူကြို နဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ လားလားမျှ မအပ်စပ်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူက အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတာနဲ့ အသက်ကွာတာကလွဲလို့ နှစ်ယောက်လုံး သူငယ်တန်းပေါ့.. အနော်က ကလေးဆိုတော့ (အဲ့အချိန်က ပြောပါတယ်) စီနီယာက (မြန်မာလို မပြန်တတ်တော့လို့) ပြောပြတာတွေကို ဟုတ်ကဲ့..ဟုတ်ကဲ့ ပေါ့.. သူကကျတော့ ဟုတ်ပြီ.. ဟုတ်ပြီ တဲ့.. (သင်ပေးတဲ့အစ်မက သူ့ထက် ငယ်တယ်) နားထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲ..စဉ်းစားကြည့်တော့ ဟုတ်ပြီဆိုတာ အထက်လူကြီးကို အကြောင်းကြားအစီရင်ခံတဲ့အနေရာမှာ လူကြီးက ပြန်ပြောတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးဖြစ်နေတယ်..
လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ကတော့ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို ကြည့်လိုက်တာပဲ.. သတိတောင် မထားမိတော့ဘူး..
ဆဲတာကတော့ ဆဲတဲ့သူက မသိပေမယ့် ဘေးက ကြားရတဲ့သူက အတော်လေး နားထောင်ရခက်တယ်… ဆဲတဲ့အကျင့်တွေကိုတော့ ပျောက်စေချင်သား…
သူမ ကိစ္စကတော့ လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး.. ဒါပေမယ့်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေ…
ကိုအလက်ဆင်းနဲ့ သဂျီးလာမှ ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း။ နောက်ထပ်ဆွေးနွေးထောက်ပြမှုများကိုလည်း ကြိုဆိုပါကြောင်း။
ဟတု် ဘူး ဗျ
့he = သူ
နိုင်ငံ ခြား စုံ ထောက် ဝတ္တု တွေ ကို ဘာ သာ ပြ န် ခဲ့ ကြ တဲ့ 1970 ပါတ် ဝန်း ကျင် က ဆ ရာ ကြီး တွေ က စ ခဲ့ တယ်
ထင် မိ ပါ တယ်။
မှား တယ် ဆို လျင် တော့ ကျေ နာ် အမှတ် မှားလို့ ဘဲ
ယဉ်ကျေးမှုကို သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိပါတယ်။
ရောမရောက်ရင် ရောမလို ကျင့်ရမယ်ဆိုသလို သူ့နေရာ သူ့အထာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေနေတတ်အောင် ကြိုးစားရင် အကောင်းဆုံးပေ့ါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးလို့ ထင်ထားရာက….
တူတော်မောင်က ‘အဒေါ်ကလည်း ပိန်းလိုက်တာ’ ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့တင် ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ခဲ့ရပါပကောလား။
ကိုယ်ကသာ ဒေါသမပြေနိုင်အောင် ဖြစ်ရတယ်………
တူတော်မောင်က ကိုယ့်အဒေါ်ဘာဖြစ်လို့ စိတ်ဆိုးတယ် ဆိုတာကိုတောင် နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။
(မေး) ဆရာကြီးခင်ဗျား၊ သူမ-လို့ သုံးတာ မှားတယ်လို့ မှတ်သားရဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူမ-လို့ ရေးသားပြောဆိုနေကြတာ မြင်နေ၊ ကြားနေရပါတယ်။
တချို့က သူမ-လို့သုံးတာ မမှားပါဘူး၊ လူကြီးသူမ-လို့သုံးတာ မှန်တာပဲလို့ ပြောကြပါတယ်။ ရှင်းပြစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒီအကြောင်းကို ဆရာတို့ရဲ့ ဆရာကြီးတွေ အကြိမ်ကြိမ်ရေးဖူးပါတယ်။ ဆရာလည်း လေးငါးကြိမ် ရေးဖူးပါတယ်။
သူမ-ဆိုတာ နာမ်စားအနေနဲ့ အသုံးမရှိဘူး။
မြန်မာစကား၊ မြန်မာစာပေ အစဉ်အဆက် သူမ-ကို နာမ်စားအဖြစ် မသုံးခဲ့ဘူး။
မြန်မာစကားရဲ့ သဘာဝနဲ့လည်း မကိုက်ညီဘူး။
ဒါကြောင့် သူမ-ကို မသုံးသင့်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
( နာမ်စား သုံးမျိုး )
မြန်မာစကားမှာ အခြေခံကျတဲ့ နာမ်စား ၃-မျိုးရှိတယ်။
နာသူနာမ်စားက နင်၊ သင်၊ မင်း၊
အခြားသူနာမ်စား (အပြောခံနာမ်စား) က သူ-ပေါ့။
ဒီနာမ်စားတွေကို ရှေးကတည်းက သုံးလာတာပါ။ (ခင်ဗျား၊ ကျွန်တော်၊ ရှင်၊ ကျွန်မ ဆိုတဲ့ နာမ်စားတွေက နောက်မှ ပေါ်လာတာပါ)။
အဲဒီအရင်းခံ နာမ်စားတွေကို ကြည့်ပါ။ ငါ-ဟာ ယောက်ျားလား၊ မိန်းမလား လို့မေးရင် ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ ငါ-ဟာ ယောက်ျားရော၊ မိန်းမရောသုံးတဲ့ ပြောသူနာမ်စား မဟုတ်လား။
သင်၊ နင်၊ မင်း-တို့ဟာလည်း ယောက်ျားရော၊ မိန်းမရောသုံးတဲ့ နာသူနာမ်စားပါပဲ။ အဲဒီလိုပဲ သူ-ဆိုတဲ့နာမ်စားဟာလည်း ယောက်ျားရော၊ မိန်းမပါ သုံးတဲ့နာမ်စားပါ။
ကဲ၊ ဆရာတို့ နေ့တိုင်း သဘာဝကျကျ ပြောဆိုနေတဲ့ မြန်မာစကားကိုပဲ မူတည်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဆိုပါတော့။ မြမြဆိုတဲ့ မိန်းကလေးအကြောင်း ပြောရင် မြမြဟာ သူ့မိသားစုမှာ သမီးအကြီးဆုံးမို့ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို သူပဲ တာဝန်ယူနေရတယ်-လို့ ပြောမှာပဲမဟုတ်လား။
မြမြဟာ သူမမိသားစုမှာ သမီးအကြီးဆုံးမို့ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို သူမပဲ တာဝန်ယူနေရတယ်-လို့ ဘယ်သူပြောမှာလဲ။ အဲလိုပြောရင် ရယ်စရာ ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ အဲဒီလိုပဲ ဟာ-ထွေးထွေး ထွက်သွားပြီ၊ သူမစာအုပ် မေ့ကျန်ခဲ့တာ လိုက်ပေးလိုက်ပါ-လို့တော့ ဘယ်သူမှ မပြောပါဘူး။
( သူမ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ )
မြန်မာစကားမှာ သူမ-ဆိုတဲ့ နာမ်စား မရှိတဲ့အတွက် သဒ္ဒါစာအုပ်တွေ၊ အဘိဓာန်တွေမှာ သူမ-ဆိုတဲ့စကားလုံး မပါပါဘူး။
ဒါဆိုရင် အဲဒီ သူမ-ဘာကြောင့်ပေါ်လာရသလဲလို့ မေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်က နက်စဖီးရေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါကို မြန်မာဘာသာပြန်တဲ့ ဆရာကြီးက he-ကို သူ၊ She-ကိုလည်း သူ-လို့ပဲ ဘာသာပြန်ခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် She-ဟာ မိန်းမ၊ အမ-ကိုဆိုလိုကြောင်း သိသာအောင် သူနောက်က ကွင်းလေးနဲ့ (မ) လို့ထည့်ပြီး သူ(မ)လို့ ပြခဲ့တာပါ။
အဲဒါကို သူမ-လို့သုံးရင်း အသုံးတွင်ကျယ်လာတာပါ။
ဒါကြောင့် သူမ-ဟာ မြန်မာစကားမှာ မရှိတဲ့ အသုံးပါ။ ဆရာကြီးတယောက်ကတော့ သူမ-သုံးချင်ရင် ဒီ့ပြင်နာမ်စားတွေကိုပါ ခွဲပြီး ငါမ-တို့၊ နင်မ-တို့၊ သင်မ-တို့ သုံးပါလို့ ဟာသလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
( လူကြီးသူမ အသုံး)
မေးခွန်းမှာပါတဲ့ လူကြီးသူမ-မှာ သူမ-က နာမ်စားမဟုတ်ပါဘူး။ မ-ဟာ ကြီးသည်-လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ သူမ-ဆိုတာ သူကြီး-ပါပဲ။ လူကြီးသူကြီး-ကို လူကြီးသူမ-လို့ စကားပရိယာယ်နဲ့ အလဲအလှယ်သုံးတာပါ။ လမ်းမ၊ ခန်းမ-တို့ လိုပဲ။ သူမ-ဟာ သူကြီး-လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
တချို့က ဆရာမကြီး ဂျာနယ်ကျော် မမလေးရဲ့ သူမ-ဝတ္ထုကို ကိုးကားပြီး သူမ-အသုံးရှိတယ်လို့ သက်သေထူချင်ကြတယ်။ အဲဒီ သူမဟာလည်း နာမ်စားမဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာကြီး ဦးချစ်မောင်က သူ-ဝတ္ထုရေးတာကို ဆရာမကြီးက ဆင်တူ သူမ-လို့ ဝတ္ထုနာမည်ပေးပြီး ချီးကျူးစရာ အမျိုးသမီး တယောက်အကြောင်း ရေးတာပါ။ အဲဒီဝတ္ထုထဲမှာပါတဲ့ အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်တွေကို ရည်ညွှန်းတဲ့ နာမ်စားတွေမှာ သူမ-တလုံးမှ မပါပါဘူး။ ဒီလောက်ဆိုရင် ရှင်းလောက်ပါပြီ။
(မင်္ဂလာမောင်မယ် ၂၀၁၀-ခု ဇွန်လ)
Source : http://www.pannaparami.com/2010/10/blog-post_5047.html
ဘာရယ် မဟုတ်။ ဒါလေး တွေ့လို့ ဆွဲလာတာရယ်ပါ …။
ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ရေးတဲ့ ..ထဲ သူမ ကိစ္စပဲ ခေါင်းထဲပြန်ရောက်လာလို့ ..အဲ့လာပဲ ဆွေးနွေးချင်ရဲ့ဗျို့..
မျက်နှာများတဲ့ မောင် ရေးတဲ့ထဲ က ဆရာကြီးပေါ့ ..အာဟိ
အဲ့သည့်ဆရာကြီးက ရုံးသုံး မြန်မာစာ ရေးနည်း ဆိုတဲ့ထဲမယ် အဲ့သူမ အကြောင်း ထည့်ရေးသေးတယ်ဗျ..
ကျနော် တောင် တခါ .. မြရဲ့လ .. ဆွဲထုတ်လာသေးတယ်..အာဟိ။
ကျန်သေးတယ်.. ယောက္ခမ ပဲ ရှိ ယောက္ခထီး မရှိ တို့ ဘာတို့ …။
ကျွန်တော် ကျွန်မ ပဲ ရှိတယ်.. ကျနော် ကျမ မရှိဘူး တို့ ဘာတို့ …။ တပြုံကြီးရယ်..။
ရှေးသုံး ဘယ်လိုပဲ သုံးသုံး.. မရှိခဲ့မရှိခဲ့ပေါ့..။ သိထားရင် ဗဟုသုတ ရတယ်။
အီဗော်လျူးရှင်း ဖြစ်လာရင်တော့ … သင့်လျော်ရင် ထည့်ပေါင်းပေးသင့်တယ် မှတ်ပါတယ်။
ကျနော်တော့. .. ဖတ်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူက ဘာလုပ်တယ် ဆိုတာ ရှင်းလင်းစေမယ့်..
တတိယနာမ်စား အသုံးအနှုန်းတွေ ကို ဘက်ကပဲ ရပ် ချင်ပါကြောင်း…။
P.S .. ယောက္ခဖ သမိုင်းတွင်လျင်.. CD ပေးပါလေ..။
သေချင်းစိမ်းတော့ တွင်နေပြီ မောင်ဂီရေ။
အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်မှာ Google ဆိုတဲ့စကားလုံးကို Verb တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းလိုက်ပါသတဲ့…
ဒါကို အရင်ကတည်းကမရှိလို့ မရှိပါဘူးလို့ Googling လို့ သုံးခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရတော့ပါဘူး…
အပေါ်က မောင်ဂီပြောသွားတဲ့ အီဗော်လျူးရှင်းပေါ့…
မြန်မာစကားမှာလဲ အရပ်သုံးစကားအချို့ဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ နေ့စဉ်သုံးမြန်မာစာထဲရောက်လာရင်…
အဲ့လိုဖြည့်စွက်နေလို့ပဲ… Oxford Dictionary တွေဟာ Edition တစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်…
ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိတဲ့ မြန်မာအဘိဓာန်တွေဟာ တစ်ခါထုတ်… တစ်သက်လုံးသုံးဖြစ်နေတာပါ…
အံဇာ ကူးလာတာလေး ကောင်းတယ်
မြန်မာသဒ္ဒါပိုင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး မောင်ခင်မင်(ဓနုဖြူ) ရေးသားပြုစုနေတဲ့ ကျမ်းငယ်လေးတွေက
ကျနော်လည်း အဲ့ဒိ ဆောင်းပါး စာစြလေးတွေ စာအုပ်အဖြစ် ဝယ်သိမ်းထားတာတွေ ရှိပါတယ်။
မြန်မာစကား စာ ကို
ခုမှ သူ မ ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဆိုတာ ကွဲပြားစွာ
နားလည်ခဲ့ပါပြီ ကျေးဇူးကဘာဆိုင် ရော
သတင်းစာထဲမှာ မြန်မာစာ အသုံးအနှုန်းတွေအကြောင်း ဆောင်းပါးတွေ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ဖြတ်ပြီး သိမ်းထားတယ်။
ယဉ်ကျေးတယ် မယဉ်ကျေးဘူးဆိုရာမှာ အခြေအနေအချိန်အခါဆက်ဆံခံရတဲ့သူကို လို်က်ပြီးတော့လည်း ကွဲပြားသွားတတ်ပါတယ်။
သူမ ဆိုတာကို ကိုယ်တော့ သိပ်မသုံးမိပေမယ့် သုံးလာရင်လည်း မျက်စိ စပါးမွေးမစူးဘူး။
တက်နဲ့ တတ် လိုမျိုး မှားသုံးနေကြတာတွေတော့ ကြည့်မရဘူး။
တကူးတက ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ အူးအူး အံဇာကိုလည်း ကျေးဇူးအနန္တတင်ရှိပါသည်။ ကျန်ရှိတဲ့ အူးအူးဒေါ်ဒေါ်များအားလုံးနှင့် ကိုကိုမမများကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း
သူမ ဆိုတာ ကတော့ “ရေသူမ” ဆိုတာက နေ သက်ဆင်းလာတာဘဲ ဖြစ်မယ်။
ရေသူမ တွေ က ချောလွန်းတာ မဟုတ်လား။
ယော ယောသူတို ့ရွာ..
ကျွန်တော် ့မမ ပုသိမ်သူ…
ယော ယောသူမတို ့ရွာ…
ကျွန်တော် ့မမ ပုသိမ်သူမ..
မုဒ်အပြည့်န ဲ့ ခံစားဆိုကြည့်။
ဂေဇက်ရွာသူမ အရီးခင်၏ ရေသူမ၏ လင်အား
(ဒီမှာလည်း ဂွကျတယ်။ တိရစ္ဆာန်မှာ လင်မယား အခေါ်အဝေါ် မရှိတော ့)
ဂေဇက်ရွာသားထီး Paing Lay မှ ရေသားထီးဟုခေါ်ဆိုသည်။
ကျွန်မျိုး, ကျွန်တော်မျိုး, ကျနော်မျိုး မြန်မာစာ မြန်မာစကားအား ရှုပ်ထွေး
ဂေဇက်ယွာသဂျီး မာမွတ်ခိုမ်ဂို ဖက်ကင်ရက်စပတ် ပေးဗာအိ.. ယူစေသဒီ…
အောင်ကြူးကတော့ ပေးစရာရှိတာ ပေးတွားဘီ………ကိုရင်စံလှကြီးအလှည့် ဘယ်လိုဆွေးနွေးပေးဦးမလဲမသိ
မြန်မာစာ မှာ သူမ ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး ကို ရည်ညွှန်း တဲ့ အသုံးအနှုန်း မရှိဘူးလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်ဗျ။
ဂျာနယ်ကျော် မမလေး ရဲ့ သူမ ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာတောင် တော်တော်လေး ရှင်းထားသေးသလားပဲ။
အပေါ်မှာ ခြောက်မျက်နှာ ဆရာမောင်ခင်မင် ဟာလေး ကူးရှင်းပြထားတဲ့ အထဲ ဒီလိုလေး တွေ့တယ်
“( လူကြီးသူမ အသုံး)
မေးခွန်းမှာပါတဲ့ လူကြီးသူမ-မှာ သူမ-က နာမ်စားမဟုတ်ပါဘူး။ မ-ဟာ ကြီးသည်-လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ သူမ-ဆိုတာ သူကြီး-ပါပဲ။ လူကြီးသူကြီး-ကို လူကြီးသူမ-လို့ စကားပရိယာယ်နဲ့ အလဲအလှယ်သုံးတာပါ။ လမ်းမ၊ ခန်းမ-တို့ လိုပဲ။ သူမ-ဟာ သူကြီး-လို့ ( လူကြီးသူမ အသုံး)
မေးခွန်းမှာပါတဲ့ လူကြီးသူမ-မှာ သူမ-က နာမ်စားမဟုတ်ပါဘူး။ မ-ဟာ ကြီးသည်-လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ သူမ-ဆိုတာ သူကြီး-ပါပဲ။ လူကြီးသူကြီး-ကို လူကြီးသူမ-လို့ စကားပရိယာယ်နဲ့ အလဲအလှယ်သုံးတာပါ။ လမ်းမ၊ ခန်းမ-တို့ လိုပဲ။ သူမ-ဟာ သူကြီး-လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။။”
အဲဒီ မှာ သူမ ဟာ သူကြီး လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ် ဆိုတော့
သူမ ဟာ သူကြီး ဆိုရင် သူကြီး ဟာ သူမ လို့ ယူလို့ရမယ်
ဒါဆို သူကြီးခိုင်လို့ ခေါ်နေသူတွေ သူမခိုင်လို့ ပြောင်းသုံးရင်လဲ ရမှာပဲ
သူကြီး တစ်လုံးထဲ သုံးသူတွေကတော့ သူမ လို့ပဲ ခေါ်ပေါ့
သူမ လို့ပဲ ဆက်လို့ခေါ်မည် ခိုင်